Gopi Krishna Dhungana (Pathik) : 2011
मेची अञ्चल झापा जिल्ला गौरादह गाउंमा,
यो मन सधैं पुगुं भन्छ उडी आफ्नै ठाउंमा ।।
खोलानाला हरियाली बगैंचा र ताल यी,
अंगाल्या’छ प्रकृतिलाई अडिग राख्छौं भाउमा ।।
दुई छाक टार्न गाह्रो थियो आज आÇनै शानमा,
ई–मेल र इन्टरनेटमा विश्व घुम्ने दाउमा ।।
शिखर चुम्न खोज्छ कैल्ये कैल्ये सगरमाथा,
व्यथा सबै लुकार’नि मलम लाउंछौं पाउमा ।।
साहित्यकार, इन्जिनियर, डाटर, शिक्षक, नेता,
जन्माउंछ, हुर्काउंछ, गर्व गर्छौं नाउंमा ।।
मुस्कुराउंछ आगमनमा रुन्छ सम्झी बिछोड,
जब पाउंछ मौलिकता ब्याजमा भन्दा साउंमा ।।
विवेकमा विश्वास राख्छ शुभ–दिनको स्वागत,
स्वर्ग बनाउं आफ्नै गाउंलाई मिलि सबै गाउंमा ।।
गौरादह, झापा, मेची अञ्चल
च्यातिएको नाता Gazal
Gopi Krishna Dhungana Pathik
नदुख्ने भो अब मलाई कुनैपनि पोलाइले,
नथाम्ने भो कम्पन मेरो कुनैपनि छोपाइले ।
कल्पनाको संसारमा चन्द्रमा नै सम्झेपछि,
नबुझ्ने भो चित मेरो कुनैपनि सोचाइले ।।
यात्राहरुमा मेरो पाइला धर्ती कै धुलो भएपछि,
नबिझ्ने भो पाऊ मेरो कुनैपनि घोचाइले ।
उत्कृट ती अभिलाषा सगरमाथा बनेपछि,
नभेट्ने भो गहिराई मेरो कुनैपनि होचाइले ।।
आÇनो स्वार्थ पूरा गर्न सिउंने निहुंमा च्यातेपछि,
नजोड्ने भो नाता मेरो कुनैपनि बोलाइले ।।।
बन्दीपुरमा साहित्यिक सूर
बस्न मन लाग्दैन अन्त
बन्दीपुरमै रमाउँछ यो मन त...
साँझको चिसो वातावरणमा बन्दीपुर गेष्ट हाउसको कौसीमा दुई दर्जनजति स्रस्टामाझ भीष्मकुमार श्रेष्ठले छन्दवद्ध कवितामा बन्दीपुरको वर्णन गरे । बन्दीपुरको सेरोफेरो समेटेर बन्दीपुरनामक महाकाव्य लेख्ने उनका श्लोकहरुले चिसो वातावरण तताउँदै थिए । फूलमालाको स्वागत पायौं ।
बन्दीपुर पुगेकै दिन कात्तिक २६ गते बन्दीपुर बजारस्थित बन्दीपुर पद्म पुस्तकालय परिसरमा स्थानीय सर्जकले सिर्जना सुनाउने कार्यक्रम राखिएको रहेछ । भगवती चोकमा २००१ सालमा स्थापना गरिएको पुस्तकालयका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीनाथ शर्माले राणा शासनकालमा पुस्तकालय खोल्न लाग्दा रामप्रसाद खनाल, सूर्यलाल प्रधानलगायत चारैजनालाई पक्रिएको र केही समयपछि पद्म शमशेरको नामबाट खोलेको जानकारी दिए । ऐतिहासिक पुस्तकालयको नाममा पछि बन्दीपुर थपेर नामाकरण गरिएको उनको भनाइ थियो ।
दर्जनबढीको कविता सुन्नेक्रममा कृष्णचरण उपाध्यायको यो देश नै स्वर्ग छ है मलाई शीर्षकको छन्दवद्ध कविताले सबैको मन छोयो । विना पारिश्रमिक रचना छपाउन बाध्य स्रस्टा पुस्तकमा हजारौं खर्चिए पनि त्यसको बिक्री गर्न असमर्थ भइरहेका छन् । सित्तै बाँड्दा पनि नपढिदिने समस्याले स्रस्टा झनै पिरोलिने गरेका छन् । सित्तै बाँड्नु परेपछि कम्तिमा कृति पढ्ने पाठक नै खोज्छन् स्रस्टाले । साथमा केही उपहार पनि हुने । यही अवसर मिल्यो अनेसासमार्फत् राजधानीका स्रस्टालाई । सबैका एक दुई गरी झन्डै ५० वटा कृति उपहार दियौं पुस्तकालयलाई ।
अन्तर्राष्टिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको दुई दिने बन्दीपुर स्रस्टा यात्राका लागि राजधानीबाट करिब दुई दर्जन र बन्दीपुरबाट बसाई सरेर चितवन पुगेका तीनजना स्रस्टाको जमघट भएको थियो । अनेसास नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीको संयोजकत्वमा बन्दीपुर गएको साहित्यिक टोलीमा मोहनबहादुर कायस्थ, भीम उदास, रञ्जना उदास, जलेश्वरी श्रेष्ठ, पवन आलोक, शिवप्रकाश, प्रतिक ढकाल, गोपीकृष्ण ढुंगाना, कृष्ण जोशी, गोवद्र्धन पूजा, मणिराज सिंह, किशोर पहाडी, जयदेव भटराई, मणि लोहनी, भीष्मकुमार श्रेष्ठ, विजयध्वज थापा, प्रघुम्न जोशी, बाबा बस्नेत, सन्ध्या पहाडी, गीता कार्की, शान्ति रिसाल, बसन्त श्रेष्ठ, राजु दाहाल, नरेश श्रेष्ठ र नारायणघाटबाट प्रेमविनोद नन्दन, रमेशलाल श्रेष्ठ, भानु जोशी सहभागी थिए ।
पुस्तकालयबाट टोली टुँडिखेलहुँदै बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्ट पुग्यो । विशेष स्थानमा पिकनिक जाने राजधानीबासीलाई टुँडिखेलमा देखिएका सय बढी पिकनिकका समूहले अचम्मित तुल्याएको थियो । कोही खाँदै, कोही गाउँदै त कोही नाँच्दै टुँडिखेलको सौन्दर्य बढाउँदै थिए । रिसोर्टमा मोहनबहादुर कायस्थको अंग्रेजी कथा कृति अ बुक अन द टेबल र अनेसास फ्लोरिडा च्याप्टरबाट प्रकाशित सागर साहित्यिक पत्रिकाको विमोचन गरिए । बन्दीपुर महाकाव्यका लेखक भीष्मले अनेसासको आयोजनामा साहित्यिक टोली बन्दीपुरमा आएर विशेष कार्यक्रम गरेकोमा बन्दीपुरेको सौभाग्य भएको बताए । खासगरि यौनकथालाई आफ्नो विशेषता बनाएकी कथाकार जलेश्वरी श्रेष्ठलाई बिहे गरेर बन्दीपुरमा ल्याइएको भन्दै बन्दीपुरकी बुहारीको उपमा दिइयो । अनेसासका ट्रस्टी अर्थात् संस्थापक सदस्य भीम उदासले अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा अनेसासको भूमिका विषयक मौखिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
रिसोर्टमा जमेको साहित्यिक माहौलले नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्टियकरण गर्न बन्दीपुर घोषणापत्र जारी गर्ने योजना बनायो । घोषणापत्रका लागि राधेश्याम लेकालीको संयोजकत्वमा भीम उदास, गोपीकृष्ण ढुंगाना, कृष्ण जोशी, प्रद्युम्न जोशी, सन्ध्या पहाडी, रञ्जना उदास, जयदेव भटराई र मणि लोहनीको समिति गठन गर्यो । लेकालीले अनेसासको आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराए, करिब दुई सय स्रस्टाको जमघट हुने गरी आगामी माघको दोस्रो साता इलाममा कार्यक्रम गर्दैछौं । स्थानीय स्रस्टा तनहुँको ऐतिहासिक पक्षलाई कोट्याउँदै थिए, बेदव्यासले १८ पुराण रचेको जिल्ला तनहुँ । लोडसेडिङ र पर्यटकको भीडले कविता वाचनको कार्यक्रमलाई बास बस्ने बन्दीपुर गेष्ट हाउसमै सरेको जानकारी दिइन् बाबा बस्नेतले ।
साँझ झमक्कै परेको थियो । साँझसँगै बढेको चिसोमा रमाउन नसकिरहेका साहित्यकारलाई तताउन क्याम्प फायर पनि हौसिएको थियो । डिनरअघि रमाइलो गर्न मोहनबहादुर कायस्थले सिर्जना फुराउने र जीउ तताउने रस र खाजाको व्यवस्थापन गर्नुभएको रहेछ । कायस्थका अलावा स्थानीय भएकै नाताले द्धारिका श्रेष्ठ र जलेश्वरी श्रेष्ठले पनि खानपीनको व्यवस्थामा सहयोग गर्नुभएको रहेछ । क्याम्प फायर, सोमरस र स्रस्टाका प्रेमप्रसंगका सिर्जनाले त्यो चिसो तातोमा परिणत भएको थियो ।
अघिल्लो दिन हेर्न नपाएका धौलागिरी, अन्नपूर्ण, लाङटाङ, मनास्लु आदि हिमाल भोलिपल्ट बिहान हेर्ने योजना बनाएका हामीलाई खराब मौसमले पुनः धोका दियो । सूर्योदय अघि नै झन्डै भुइचालोले धोका दिएको थियो । मध्यरातसम्म व्यक्तिगत, साहित्यिक र देशका विविध पाटामा छलफल गरेर निदाएका हाम्रो निद्रा नपुग्दै भुइचालोले ब्युझाइदियो । २०५२ सालमा खोलिएको बन्दीपुरकै पहिलो होटल मानिने बन्दीपुर गेष्ट हाउसको टुडिखेलछेउको नयाँ भवन निर्माणाधीन अवस्थामै रहेकाले हामीले अत्यन्तै असुरक्षित महसुस गर्यौं । ए भुइचालो भुइचालो भन्दै लेकाली दाइले सबैलाई जयाकजुरुक बनाउनुभयो । गोरखाको उत्तरी क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर पाँच रेक्टर स्केलको त्यो भुइचालो चार सेकेन्डमात्र गएको रहेछ । कोठाबाट बाहिर निस्कनमात्र भ्यायौं । बाहिर कौसीबाट पछाडिपटि तल जमिनमा हेरेको त धेरै तल । भुइचालोको धक्कामात्र महसुस गरेका हामीले त्यो अग्लो घर भत्किएको भए हाम्रो दुर्दशा कस्तो हुन्थ्यो होला ? भनेर मुटु कमायौं ।
सबैको सहमति जुटेपछि मर्निङ वाक शैलीमा बन्दीपुरको परिक्रमाका लागि हामी केही निस्कियौं । महिला र अन्य साथी थकान मेट्न र जाडो छल्न सिरकको साथ छोडेनछन् । भीष्म दाइले केहीबेरको यात्राबाट तीनधारा पुयाउनुभयो । तर अचम्म । त्यहाँ त पाँच धारा रहेछन् । भूत, प्रेत र पिशाचले अत्यन्तै दुःख दिने ठाउँ रहेछ त्यो । उहाँले महाकाव्यमा लेखेका तीनधाराबारेका श्लोक पनि सुनाउनुभयो । दुईवटा धारा अछूत भनिएका जातका लागि रहेको थाहा भयो । झन्डै दुई वर्षअघि बोडे उच्च मावि भक्तपुरका मेरा पत्रकारिताका विद्यार्थीलाई लिएर पाल्पा र लुम्बिनी भ्रमण गराउने क्रममा केही घण्टाका लागि बन्दीपुर पनि पुयाएको थिएँ । साहित्यिक टोलीसँग हिड्दा तत्तत ठाउँमा दुई वर्षे पुराना सम्झना दोहोरिन्थे । पुरानो गाविस भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेछ । छेवैमा बन्दीपुरको पुरानो खड्गदेवी मन्दिर । त्यही मन्दिरको भवनमा पढेर राष्टिय व्यक्तित्व भएकाको कारुणिक कथाले मन कुड्यायो ।
माथि सहिद स्मारक छ, जाने होइन भन्दै भीष्म दाइले पछि लगाउनुभयो । सात सालको जनक्रान्तिमा राणा सरकारले मारेका धर्मध्वज गुरुङ, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर सार्की, खड्गबहादुर गोदार, सन्तबहादुर रानामगर र धर्मराज श्रेष्ठको सम्झनामा २०४९ सालमा स्मारक बनाएको रहेछ । अघिल्लो दिन मान्छेले छपक्कै छोपेको टुडिखेल बिहान त भूइँकुहिरोले ढाकेको रहेछ । दुई घण्टा घुमेर गेष्ट हाउस पुग्दा पनि सबै उठेका रहेनछन् । हामै टोलीसँग हिड्ने लालसा पोको पार्दै गेष्ट हाउसमा भएका महिलापुरुषको टोलीलाई घुमाउने जिम्मा पाउनुभएका मोहनबहादुर कायस्थ दाइले कसैलाई घुमाउन पाउनुभएन छ ।
ब्रेकफास्टपछि पाँच बुँदेमाथि बहस सुरु भयो । उहाँले नेपाली भाषामा लेखिएका उत्कृष्ट कृृति र रचनाको छनोट र संकलन गर्ने, नेपाली रचनाहरुलाई अंग्रेजीलगायत विभिन्न भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने, नेपाली कृति र रचनाहरुलाई देश विदेशमा पुयाउन विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन पत्रिका र वेवसाइटहरुको प्रयोग गर्ने, मुलुकभित्र रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोग, मुलुकबाहिरका नेपाली दुताबास र विभिन्न मुलुकभर रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ परिचालन गरी साहित्यको विस्तार गर्ने र अनेसासबाट प्रकाशित पुस्तक र पत्रपत्रिका विभिन्न मुलुकमा ढुवानी गर्दा सतप्रतिशत छुट दिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने लेकालीले अनेसास ३८ देशमा ७१ वटा च्याप्टरमा फैलिएको र एनआरएनसँग मिलेर तिनका ५६ देशका शाखामा पनि कृतिको बजार व्यवस्थापन र साहित्यिक गतिविधि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रद्युम्न जोशीले त्रिभुवन विमानस्थलमा बुक स्टल राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रतिक ढकालले अनुवाद गरेर फेरि हामी साहित्यकारले नै पढ्ने हो भने अनुवाद गर्नुको अर्थ नभएको र विदेशीले प्रकाशन, वितरण र पढ्ने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कायस्थले विदेशीले पढ्ने गरी अनुवाद गर्ने कृति त्यतिकै गुणस्तरीय पनि हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । शिवप्रकाशले एनआरएन र अनेसासलाई चिन्ने विदेशमा रहेका नेपाली पनि कम भएको टिप्पणी गर्दै नेपाली साहित्यको विदेशमा बजारको समस्या ठूलो देखेको बताउनुभयो । प्रेमविनोद नन्दनले प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञिक थलो बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै अनेसासमात्र होइन सरकारले पनि नेपाली साहित्यलाई संसारभर फैलाउन योजना र प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृष्ण जोशीले नेपाली साहित्य अन्तर्राष्टियकरण गर्ने जमर्कोको प्रसंशा गर्नुभयो । पाँच बुँदेलाई हतारमा घोषणा नगर्न र राजधानीका स्रस्टा र साहित्यिक संघबीच पनि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सुझाव र दबाब बढेपछि बन्दीपुरमा घोषणा गरिएन ।
नेपाली उखानझैं तीनपटकको प्रयासमा कविता वाचन जुर्यो । कृष्ण जोशी, विष्णुबहादुर सिंह, गोपीकृष्ण ढुंगाना पथिक, प्रद्युम्न जोशी, मणिराज सिंह, गीता कार्की, शान्ति रिसाल, राजु दाहाल, विजयध्वज थापा, पवन आलोक, प्रतिक ढकाल, गोवद्र्धन पुजा, किशोर पहाडी, बाबा बस्नेत, शिवप्रकाश, रञ्जना उदास, भीष्म श्रेष्ठ, वसन्त श्रेष्ठ अपेक्षा, भीम उदास र राधेश्याम लेकालीले कविता र गजल सुनाए । बन्दीपुरका प्राचीन बस्तीलार्ई साक्षी राखेर सुनाइएका एक से एक मन छुने सिर्जनालाई प्रतिकूल मौसमका कारण हिमालले भने न हेर्न सक्यो न त सुन्न नै ।
Dr Aruna Upreti
वेशीसहर, भाइटिका र सुनसान सडक
सबै भाइटिकाको तयारी गर्दै थिए । तर यो वर्षहाम्रो परिवारलाई न दसैंले छोयो न त तिहारले नै । न विगतका उमंगले मुटुको कुनै कुनामा कोट्यायो न मनले कुनै नरमाइलो नै महसुस गर्यो । कसैलाई राम्रो देख्नु वा नराम्रो, केही कुरा ठीक लाग्नु वा वेठिक अनि खुसी मान्नु वा दुःख, सबै सबै मनमा भरपर्दोरहेछ । यही बुझें, ३६ औं बसन्तसम्म चार्डपर्वमा खुसी र उमंग साट्दै आएको मैले हजुरबुबाको निधनले यसवर्षा मुख्य चाड दसैं र तिहार मनाउन नपाउँदा पनि ।
भाइटिकाको तयारी भइरहँदा, लमजुङको वेशीसहरबाट काठमाडौंसम्म मोटरसाइकल यात्रा थियो मेरो । अन्नपर्ूण्ा पोष्टको शैली परिशिष्टांकको तयारीका कारण शनिबार भए पनि काठमाडौं आइपुग्नैपर्ने बाध्यता थियो । २०६८ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन, सबै लक्ष्मीको पूजा र देउसीभैलीको तयारीमा रहँदा जीवनसंगिनी कमला र म भने सात घण्टे लामो पहाडी बाटोहुँदै पहिलोपटक वेशीसहर गएका थियौं । मोटरसाइकलमा राजमार्गसमेतको यति लामो यात्रा मेरा लागि पहिलोपटक भएकाले चुनौति र रमाइलो दुवै थियो ।
बयालीस किलोमिटरको बेसीसहर डुम्रे सडक । मर्स्याङ्दी नदीको किनारैकिनार । कहिले नजिकै अंगालो मार्न आइपुग्थ्यो मर्स्याङ्दी त कहिले मदेखि टाढा भाग्थ्यो अनि कहिले धेरै तल लुक्थ्यो । कतै कच्ची त कतै पक्की बाटोमा दौडदा ओरालो र उकालो गर्दा मर्स्याङ्दीले आफैंतिर बोलाएझैं लाग्थ्यो र डरले मन चिउँचिउँ हुन्थ्यो । बढेको धड्कन घटाउन मोटरसाइकलमा ब्रेक लगाउनै पथ्र्यो ।
भोटेओडार, कालीमाटी, पाउँदी, बाइसजंघार र डुम्रेसम्मको यात्रामा पर्ने यी ठाउँंहरुलाई भेट्न क्रमशः म मोटरसाइकलको एक्सीलेटर जोडले बटार्थें । असहज अवस्थामा २०, ३० को स्पीडमा दौडाउने होन्डाको साइन खुल्ला र सम्म सडक भेट्नासाथ ७०, ८० को गतिमा दौडन्थ्यो । लामो समयपछि प्रेमिका भेट्न आतुर प्रेमीझैं म ती स्थान पुग्दै क्रमशः तिनलाई ओझेल पारेर झनै टाढाको बाटोतिर हुइकिन्थें । आसपासमा देखिने दृष्यहरु मोटरसाइकलको ऐनाबाट क्रमशः मलाई बाई बाई को हात हल्लाउँथे । धुमिल ती दृष्यलाई मनमा पोको पार्दै हुइकिनुको विकल्प पनि त थिएन मसित ।
डुम्रेबाट मुग्लिनको राजमार्ग पुग्दा पनि सडकमा यातायातका साधन फाट्टफुट्टमात्र भेटिए । तिहारको मुख अर्थात् लक्ष्मीपूजाको दिनमा देखिएका हजारौं सवारीसाधन र मानिस खै - त्यही सडक म हुइकिएको दिन सुनसानहुँदा लाग्थ्यो, सबै सडक मेरै हो । खुलापनले एकातिर उत्साह थप्थ्यो त अर्कोतिर मोटरसाइकल पन्चर भइहाले पाउने संभावित पीडाले मनमनै छट्पटिन्थें । डुम्रे आइपुग्दा र मुग्लिनतर्फअघि बढ्दा मेरो बाटोसँगै बगेको मर्स्याङ्दी देखेर संझिएको गीत मर्स्याङ्दी बगेर त्रिशुलीमा झरेछ.... गुन्गुनाउँदै अघि बढिरहें र धन्यवाद दिएँ गीतकारलाई ।
मुग्लिङतिरै बगेको मर्स्याङ्दी र मेरो यात्राको दिशा र शैली उस्तै, मर्स्याङ्दीको स्वच्छन्द बगाई र सुनसान सडकमा मेरो स्वतन्त्र हुइक्याई । फरक यति थियो, उ निरन्तर हुनेछ तर मेरो यात्रा भक्तपुर गठ्ठाघरसम्म मात्र । लामो यात्राले मेरो ढाड दुखेर कहिले कलबोर्टमा लड्थें त कहिले उचरमा उत्तानो पर्थें । मर्स्याङ्दीले नभनेको हुनर्ुपर्छ, यात्रामा उ पनि ढुंगाहरूमा कयौंपटक ठोक्किएको हुनर्ुपर्छ अनि मर्ुछा पर्दै खोल्सामा खसेको हुनर्ुपर्छ ।
मुग्लिन आइपुग्दा काठमाडौंमा हालेको पेटोल सकिन लागेकाले फूल ट्यांकी गरें । एक्लो यात्राले पुन गति लियो । तीब्र गति जीवनको क्षति लेखिएको बोर्ड देखें सडक किनारामा । आफूलाई सजग गराएँ । खुला सडक, कन्डिसनको बाइक, फेरि गति बढ्यो । तल हर्ेर्छर्ुुत्रिशुली नदी । त्रिशुली पनि मर्स्याङ्दीजस्तै कहिले टाढिन्थ्यो, कहिले नजिकिन्थ्यो अनि कहिले समानान्तर बग्थ्यो त कहिले सडकमुनि तल लुक्थ्यो । फरक यति थियो, मर्स्याङ्दी मेरै यात्राजसरी बगेको थियो तर त्रिशुली विपरित दिशातर्फ।
मझिमटारमा सरकारलाई सडक प्रयोग गरेवापत पाँच रुपैयाँ कर तिरें । केही अगाडि पुग्दा सडक वा खाल्डाखुल्डीले ढाडलाई झनै सास्ती दियो । मठमन्दिरको सहर भनिएको काठमाडौंलाई सडकमा पाएको सास्ती सम्झेर खाल्डैखाल्डाको सहर भनेर उपनाम दिएको मैले फेरी त्यही सम्झन पुगें । झन् नौबिसेदेखि नागढुंगासम्म त सरकारलाई जति सरापे पनि चित्त नबुझ्ने अवस्था छ सडकको । कहीकही भने भत्किएको पीचमा नयाँ पीच थपेर चिल्लो पार्दैगरेका दृष्य देखिएकाले पीडा कम गराउँथ्यो । नौबिसे पुग्न १५ किलोमिटर बाँकी थियो, अति भएपछि सफा उचरमा पल्टिएँ र ढाड सोझ्याएँ ।
राजधानीमा बसेको सौखिन ज्यान निरन्तर पेलिएको थियो । वेशीसहर जाँदाको सात घण्टे यात्राको थकान ठीक नहुँदै भोलिपल्टै तीन घण्टे उकालो लमजुङ दरबार र अर्को दिन अर्थात् भाइटिकाको बिहान मर्स्याङ्दी नदी पुग्दाको ओरालो र उकालो अनि बेशीसहर बजार घुम्दा लगाएको फन्को । पहिले झापा गौरादहमा रहँदा सहरी यात्रामात्र रोज्ने मेरो मन दर्ुइ वर्षो धनकुटाको स्नातक अध्ययन सकेर २०५६ सालमा राजधानी छिरेपछि हाइकिङमा रमाउन थालेको छ । त्यसैले सायद, दरबार जाँदाको उकालो र ओरालोमा पाएको सास्तीभित्र पनि मीठो महसुस गरें । संझें, जीवन उकाली अनि ओराली पनि त हो, कहिले सुख, कहिले दुःख । दरबार जाँदाको रोचक पक्ष र पात्र बने, पाँच वषर्ीय छोरो अञ्चित र ७४ वषर्ीया हजुरआमा नर्बदा दाहाल । लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत कान्छा काकाससुरा अम्बिका गौतम भने कार्यव्यस्तताले यात्रामा सहभागी हुनुभएन ।
छ वर्षेखिको बर्साई भए पनि काका अम्बिका, काकी सुलोचना, काकीकी आमा नर्वदा, छोरीहरु अंशुमाला र दीक्षा पनि दरबार पुग्ने अवसर पाएका रहेनछन् । काकाबाहेकको उनीहरुको परिवारसँग हामी तीनजना त्यो दरबारको यात्रामा थियौं । वर्षा तीन चारपटक काठमाडौं आउने काकाले लमजुङका लागि बारम्बार निम्तो दिए पनि अवसर नपाएका हामीलाई यसपटकको हुटहुटीले साइत जुराएको थियो । त्यही संयोग सबैको दरबार जाने साइतमा परिणत भयो ।
चउरमा पल्टिएको म काठमाडौं बेसीसहर र पुनः फर्किएको यात्रामा नोस्टाल्जिक भइरहेको थिएँ । त्यो तीन घण्टे उकालो र ओरालोमा समस्या बन्लान् भनेका पनाति र हजुरआमाले देखाएको साहसिक यात्राले सबैलाई छक्क पार्यो । लिंगे पिङमा चढ्न डराउने उसले जाँदा र आउँदा बाटोमा भेटिएका पिङमा खेल्यो र हामीलाई पनि खेल्न कर लगायो । गलेर ढुंगामा बसेका अग्रजलाई भन्थ्यो, धेरै नबस्नु है, रात पर्यो भने जंगलमा बाघभालु आउँछनरु नि । आफ्नै गोडामा कौंडा लाग्न थालेपछि अञ्चितले पोख्न नसकेको पीडा बुझेर ठाउँठाउँमा बोक्न मन लाग्यो ।
दरबार त पुग्यौं तर तिहारको छुटीले बन्द रहेछ । वरिपरि घुमेर हर्ेन नपाएको दरबार शर्ीष्ाक जुराएर बाहिरियौं । चिया पिउन पसलमा पुग्दा गाउँलेलाई सोध्न मन लाग्यो । पियन पुस्तककुमार मलेपति भेटिए, अनुरोध स्वीकार्दै खोल्दिए दरबार । मैले गीत संझिएँ, कति कुरा नभनेर नभनेरै मीठा मीठा मीठा हुन्छन्... । नुवाकोटे दरबार हेरेको मैले त्यहाँँ अध्याँरा र चिसा रित्ता कोठाबाहेक केही देख्न पाइनँ । मलेपतिले विस्तार लगाए, हजुर जनयुद्धमा माओवादीले यहाँ भएका राजाका तस्वीर र बाँकी सरसमान सबै जलाइदिएपछि यो रित्तो भएको हो ।
पानी अमला र कट्टुस खोज्दै खाँदै तीन घण्टा लगाएर गरेको आरामदायी उकालो झर्दा आधा समय काफी भयो । जति उकालोमा पुग्यो बेशीसहर त्यति नजिक लाग्ने अनौठो विशेषताले हामीलाई पहाड उक्लिन हौस्याएको थियो । चारैतिर हरियाली पहाड र वेशीमा सहर भएकाले बेशीसहर भनिएको त्यो ठाउँमा उठ्नेबित्तिकै अन्नपर्ूण्ा हिमालले स्वागत गर्दोरहेछ । उता दरबार भएको गाउँं विकास समिति त नामैले राम्रो, गाउँसहर । वेशीसहर जाँदा डुम्रेदेखि नै ठाउँठाउँंमा भेटिएका देउसीभैलीका टोलीले बाटो छेक्दै कर तिर्न लगाए । तिर्दा तिर्दा झन्डै एक हजार रुपैयाँ चुना लगाइदिएछन् ।
करिब १० मिनेटको फ्लासब्याकमा रमाएको मेरो ढाड सोझिएछ । मोटरसाइकलको गियर पुनः क्रमशः १, २, ३ र ४ मा पुग्यो । सडक किनारामा देखिएका बोर्डमा लेखिएका दर्ुघटना ताल्चा हो भने तपाई त्यसको चाबी, हतारमा दौडिएर केही भए फर्ुसदमा पछुताउने समय मिल्दैनजस्ता भनाइ मनन गर्दै नौबिसे काटें । राजधानीभित्र खोजि भइरहे पनि अरुबेला नबोक्ने मैले लामो बाटो भनेर ब्लूबुक बोकेको थिएँ तर कसैले खोजीनीति गरेन । कलंकी आइपुग्दा भाइटिका लगाएर घर र्फकनेहरुको चहलपहल सुरु भइसकेको थियो । मैले पनि संझिएँ, मेरी ठुलीआमाकी छोरी मीना दिदीलाई । मटि्टतेल र्छर्किएर आगो लगाएकी भनिएकी मीना दिदीसँग टिका लगाएको विगतको तिहार सम्झेर असैह्य पीडा भयो मलाई मुटुभरि, मनभरि । बिहानदेखि साँझसम्म अध्यापन र पत्रकारिताको व्यस्तता र भीडभाड अनि धुँवाधुलोबाट तीन दिन भए पनि मुक्ति मिलेको मलाई पुनः यही राजधानीले स्वागत गर्यो ।
काव्य कुञ्ज, गठ्ठाघर, भक्तपुर
Jhamak Ghimire n Durgalal stha.
Dr Yubaraj Sangraula
Posted by Unknown at 2:06 AM 1 comment: Links to this post
Moktan n Thakuri
Ratna samser Thapa
Kisun ji ghar
Kisun ji pahiran
singer santosi dulal
जस्केलो मै ल्याएको छु
जस्केलो मै ल्याएको छु एक अञ्जुली माया
सजाइदेउ बिन्ती हजुर राखी मलाई दाया ।
शंका गरे संसार शुन्य सापटी लेउ मन
सिउरीदेउ बेली फूलझैं सिरुपाते तन,
संघारको शितल जून, जाने मीठो छाया
जोगाउनुपर्छ भन्छन् अनिकालको बीउ
मौका आउछ पर्खदैन छोउ मेरो जीउ,
मनै न हो कस गाठो जिन्दगी माया
Rudra Dangal Steviya Allovera
Rastrakavi n Satyamohan
Geet n Geetkaar
Sanibaar ko din
Bina Vadra 069